🥇 uphendlo lweentaka
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 447
Ividiyo yokuphendula ngeentaka
Uku-odola ingxelo ngeentaka
Yonke ifama yeentaka zale mihla kufuneka, nakanjani na, igcine irekhodi leentaka zayo, ekuthi, okokuqala, zichaphazele ukubalwa kwemali, kuba ngale ndlela kuya kuba lula kakhulu ukufikelela kwizigqibo malunga nenzuzo yenkampani iphela. I-accounting yeentaka inokucwangciswa ngeendlela ezininzi, imibutho eyahlukeneyo isasebenzisa iijenali zokubala iphepha, njengesiseko sokubala, apho abasebenzi beentaka zeefama babhalisa ngesandla lonke ulwazi oluyimfuneko kwaye bagcine iitafile ezizodwa. Nangona kunjalo, enye indlela yokulawula ulawulo inokukhethwa, apho emsebenzini womntu baya kuthatha indawo yesoftware ezenzekelayo. Ikuvumela ukuba wenze yonke imisebenzi efanayo yemihla ngemihla amaxesha amaninzi ngokukhawuleza nangcono.
Ukuqala, ukubalwa kweentaka kuthetha ukulawulwa kwemisebenzi emininzi yemveliso, ekufuneka irekhodwe kwangexesha, kwaye ulwazi olufunyenweyo kufuneka lwenziwe ngokukhawuleza. Umntu ohlala exhomekeke kwiimeko zangaphandle kunye nezinto ezingaphandle, ezinje ngomthwalo womsebenzi, akanakho ukubonelela ngomgangatho oqinisekileyo kunye nozinzo lwe-accounting. Ngenxa yokuxhomekeka kwayo, ulwazi olufakwe kwizipredishithi zokwenza ingxelo ngeentaka lunokugqwethwa, lungeniswe ngaphambi kwexesha, okanye umqeshwa unokuphazamiseka ngokupheleleyo kwaye angangeni kwidatha eyimfuneko. Ngokusebenzisa isicelo sekhompyuter, uyayicutha yonke le micimbi, kuba ubukrelekrele bokwenza isoftware busebenza ngaphandle kokuphazamiseka kunye neempazamo, nokuba zithini na ezi zinto zidweliswe ngasentla
Ngale ndlela kwishishini, uqinisekisiwe ukuba ingxelo yeentaka icocekile kwaye icacile, ukugcina, ukondla, kunye nemveliso yazo. Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba ukusetyenziswa kwenkqubo yekhompyuter yokulawulwa kwemisebenzi yeentaka kunceda ukudlulisela ngokupheleleyo ukubalwa kwemali kwindiza yedijithali, eyenzeka ngenxa yezixhobo zekhompyuter zeendawo zokusebenza, ezingenakuphepheka ngexesha lokuzenzekelayo. Ukongeza kwiikhompyuter, abasebenzi befama yeentaka kufuneka bakwazi ukusebenzisa izixhobo zohlobo olwahlukileyo ezihambelana nesoftware kwimveliso. Elona candelo likhulu kwimizi-mveliso, zisetyenziselwa ukulawula oovimba abagcina ukutya kweentaka kunye neemveliso zeentaka. Ukuphunyezwa kobalo lwedijithali kunezibonelelo zalo, kuphononongo oluneenkcukacha apho kucaca ukuba indlela enjalo kulawulo yeyona ichanekileyo. Idatha yedijithali inokugcinwa kwindawo yogcino lwenkqubo ixesha elide ngelixa ihlala ifikeleleka ngokulula kubasebenzi, ke xa kunokwenzeka nayiphi na imeko enokubakho, unokuyisombulula ngokulula ngesiseko sobungqina. Ukongeza, ukugcina ulwazi kwisicelo esizenzekelayo sokubalwa kweentaka kubavumela ukuba baqinisekise ukhuseleko kunye nokugcinwa kwemfihlo, kuba ayisiyiyo kuphela isoftware yanamhlanje enenkqubo yokhuseleko yamanqanaba amaninzi, kodwa unokumisela ukufikelela kuzo kumsebenzisi ngamnye ngokwahlukeneyo. Ukuba sele uthathe isigqibo sokutshintshela ishishini lakho kulawulo oluzenzekelayo, inyathelo elilandelayo kuba kukukhetha kwesoftware efanelekileyo, ekukho uninzi lwayo ngalo mzuzu.
Inguqulelo ebalaseleyo yesicelo sekhompyuter sokwenza naluphi na uhlobo lomsebenzi yimveliso eyahlukileyo evela kubaphuhlisi abaziwayo abaneminyaka emininzi yamava, inkampani yophuhliso lweSoftware yeUSU. Ibizwa ngokuba yi-USU Software kwaye ibikhona kwintengiso yetekhnoloji ngaphezulu kweminyaka esi-8. Isicelo silungele ukubalwa kweentaka kunye nokulawulwa kweminye imiba yemisebenzi yemveliso kwifama yentaka. Ngoncedo lwayo, unokulawula ngokulula abasebenzi, ukubala kunye nokubalwa kwemivuzo, ukuhamba kwezezimali, ukugcinwa kunye nokugcinwa kwenkqubo yokondla, kunye neemveliso ezahlukeneyo, ukuphuhlisa isikhokelo seCRM, nokunye okuninzi. Ukongeza, ukumiselwa kweSoftware ye-USU yokuphendula ngeentaka ayisiyiyo kuphela inqaku layo, kuba abavelisi bamele ngaphezulu kweenkqubo ezingamashumi amabini ezahlukeneyo, ezenzelwe ngokukodwa ulawulo oluzenzekelayo lwamacandelo ohlukeneyo eshishini. Isoftware yekhompyutha enelayisensi kulula ukuyisebenzisa nokuyifaka. Inokwenziwa ngelixa uhleli eofisini, ngaphandle kwesidingo sokuya naphi na, kuba iiprogram zethu zisebenza kude kwaye zinokumisela isoftware nokuba ikude, ekufuneka unikeze ukufikelela kuyo kwikhompyuter yakho kwaye unikeze unxibelelwano lwe-Intanethi. Oku kunika iingcali ze-USU Software ithuba elihle kuba ngale ndlela banokusebenzisana neenkampani ezahlukeneyo kwihlabathi liphela ngaphandle kwezithintelo. Uyilo olufikelelekayo lonxibelelwano lwenkqubo likuvumela ukuba uqale ukusebenza kulo ngaphandle kokulungiselela okanye uqeqesho, ukuze umqeshwa onazo naziphi na iziqinisekiso anokusebenzisa iUSU Software. Ngokumangalisayo, nkqu nemenyu yale nkqubo yemisebenzi emininzi inamacandelo amathathu kuphela, anjengeeNgxelo, iiModyuli kunye neeReferensi. Kwicandelo ngalinye, amacandelwana aliqela athe aziswa anceda ekwenzeni imisebenzi yocwangciso-mali ngokweenkcukacha ezingaphezulu. Yonke imisebenzi eqhubekayo eyimfuneko yokuphumeza ubalo lweentaka irekhodwa kwicandelo leeModyuli, apho kukho ulawulo kwigama ngalinye okanye kwisifundo ngohlobo lokudala iirekhodi ezikhethekileyo ze-elektroniki okanye iitafile. Ngokwalo, eli candelo linokuboniswa njengemisebenzi yokusebenza kwezipredishithi zokuphendula ngeentaka, iiparameter ezihlengahlengisiweyo kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye. Banokufaka naluphi na ulwazi kuyo yonke imisebenzi eqhubekayo yemveliso, bekhangela imeko yemicimbi yangoku. Ukuze i-accounting igcinwe ngokuzenzekelayo, ngaphambi kokuqala umsebenzi kwi-Software ye-USU, kufuneka unikezele ixesha lokugcwalisa icandelo 'leeReferensi', elibumba ulwakhiwo lweshishini ngokwalo. Apha ungongeza iitemplate eziphuhlisiweyo zoxwebhu lwangaphakathi; Uluhlu lwabasebenzi, iintaka, ukutya, amayeza; Iishedyuli zokutshintsha kwabasebenzi; iishedyuli zokondla iintaka kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yezilwanyana, njl.
Ngokulinganayo, kubalulekile kufakelo lwesoftware yobalo lweentaka licandelo leeModyuli, elijongene nemisebenzi yohlalutyo kwimisebenzi yemveliso. Enkosi ngokusebenza kwayo, unokukhawuleza ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, uhlalutye ngokweenkcukacha nawuphi na umbandela onomdla kuwo, uqokelele iinkcukacha-manani ezisekwe kuhlalutyo kwaye ulubonakalise ukuze ucace kwifomu oyifunayo, ezinje ngeespredishithi, iitshathi, iirafu, imizobo . Kule bhloko, kunokwenzeka ukuba kuvele ngokuzenzekelayo kwaye kulungiswe iingxelo zezemali kunye nezobalo-mali, ezidlala indima ephambili kubalo. Ayinakuhlanganiswa yinkqubo yodwa, kodwa iya kuthunyelwa kuwe nge-imeyile ngexesha elifanelekileyo. Ngezixhobo ezininzi eziluncedo kwi-arsenal yayo, i-USU Software kufuneka ibe ngumncedisi obalulekileyo kunoma yimuphi umphathi okanye umnini.
Ukuqukumbela, ndingathanda ukuthi isicelo sethu esizenzekelayo sokubalwa kweentaka asisebenzi nje kuphela kwaye sisebenza ngokulula kodwa sinexabiso lentando yesininzi lokuphumeza; Inkqubo yokuhlaliswa kwabaphuhlisi be-USU ayithethi ukusetyenziswa kweefizi zobhaliso, ke ngoko, ukusetyenziswa kwesoftware ngalo lonke ixesha kukhululekile.
Kwi-USU Software, umsebenzi kunye neentaka kunye nokugcinwa kwazo kwenziwa ngokuqhubekayo, kuba ungasoloko ujonga imisebenzi ebonisiweyo yosuku kwindawo yogcino lwayo. Xa usebenza neetafile, unokwenza imimiselo yazo ngendlela yakho, ngokutshintsha inani lemiqolo kunye neeseli, ucime okanye utshintshe, uhlele umxholo wolwazi kwiikholomu ngokunyuka okanye ukuhla. Enkosi kwindalo ezenzekelayo yeengxelo zemali, uqinisekisiwe ukuba uzilungiselela kwaye uzingenise ngexesha kwaye ngaphandle kweempazamo. Kwiispredishithi zobalo, xa uzizalisa, kunokwenzeka ukuba usebenzise naluphi na ulwimi olukhoyo ukuqonda kwakho, xa uthenga uhlobo lwelizwe jikelele lwesoftwe yekhompyuter. Ukulungiselela ukondla kwe-accounting yomxholo wabo kwisicelo, unokwenza naliphi na inani leendawo zokugcina.
Ulawulo lweshishini lwe-elektroniki kwi-Software ye-USU ikuvumela ukuba ufumane olona lwazi luchanekileyo, luthembekileyo, kwaye luhlaziyiwe ukulungiselela ukubalwa kwemali ngalo lonke ixesha. Kuya kuba lula kakhulu ukulawula amanyathelo ezilwanyana kwiintaka ukuba usebenzisa i-glider yomsebenzi eyakhelwe kwisicelo. Iindleko zeemveliso eziveliswe kwifama yeentaka zibalwa ngokwenkqubo ngokwazo, ngokusekwe kwiinkcukacha zeendleko ezikhoyo, ezilungele ukubalwa. Kwiispredishithi, le nkqubo inokuqulatha kungekuphela ulwazi malunga neentaka, inzala yabo kunye neemveliso, kodwa kunye nesiseko sabathengi benkampani. Ngokwenza isiseko sedatha yabathengi, isoftware ivelisa amakhadi akho ngamnye kubo, apho ingena khona lonke ulwazi olufumanekayo kulo mntu. Unokuphuhlisa iitemplate oza kuzisebenzisa ukwenza uxwebhu lokuhamba kumbutho ngokwakho okanye uthathe isampulu ebekwe ngurhulumente.
Iiparameter zeetafile 'kwiimodyuli' zinokutshintshwa kuphela ngabo basebenzisi abafumene amandla afanayo kunye nokufikelela kumphathi. Ukulawulwa kwefama yeentaka kunokulawula ukubakho kweefayile eziyimfihlo zedatha ye-elektroniki, kuxhomekeke kwigunya lomqeshwa othile. Ukusebenza kwi-Software ye-USU kulunge kakhulu kwimisebenzi edibeneyo yeeyunithi ezininzi eziqhagamshelwe yinethiwekhi yendawo okanye kwi-Intanethi. Enkosi kwinqaku lokugcina idatha ye-accounting, kubandakanya nolawulo lweentaka, inkqubo yethu ikuvumela ukuba ugcine ulwazi lukhuselekile ixesha elide.